European Union inogadzirisa muEDPB yayo pamakuki | Linux Vakapindwa muropa
La European Union ine imwe yemitemo yakaoma kwazvo pakudzivirirwa kwedata. Asi haina kukwana, uye humbowo hweichi ndiko kugadzirisa kwake kwazvino pamakuki ewebhu mabhurawuza. Iyi gadziriso nyowani yakaitwa mune yayo yekupedzisira EDPB (European Dziviriro Kodhi Bhodhi) yakavandudza zvaimbove zvine chekuita nezve makuki izvo zvinobatsira vashambadzisi kuti vanzwisise zvirinani uye zvavanofarira zvevashandisi.
ari Cookies vagara vaine dambudziko rakakomba mukuchengeteka uye pazvinoitirwa kuchengetedza imwe nhanho yekuvanzika. Asi mapeji mazhinji ewebhu anokumanikidza kuti ugamuchire mutemo wekuki kuti uratidze zvirimo, zvinoreva kuti kana mushandisi akasazvigamuchira, havagoni kuona zvirimo. Izvi ndizvo chaizvo zvakajekeswa negwaro idzva iri neEU.
Inokavhura makuki anogona kunge asiri akawanda edambudziko kubva zvino zvichienda kune mirayiridzo yekutevera kudzora iwo ayo zvino anoonekwa mune iro gwaro. Kana uchitaura nezvekushandiswa kwemakuki nemvumo nevashandisi, ikozvino zvinoonekwa kuti vakagadzirisa zvinhu zviviri. Imwe ndeye pane chisungo chekugamuchira makuki kuona zvirimo uye imwe yacho ndeyezviratidzo zvinogona kugamuchirwa semvumo.
Naizvozvo, iwo mawebhusaiti ayo kana iwe usingagamuchire mutemo haakuratidze zvirimo, haachave anoshanda zviri pamutemo maererano neEuropean Union, uye anofanirwa kuchinjira kumitemo mitsva. Sekureva kweEU, icho chinhu chine mamiriro ekugamuchira kana kwete nemushandisi. Icho chokwadi chekusaratidza zvemukati kana iwe usingagamuchire ndechekumanikidza iwe kuti udaro neimwe nzira. Iyi ndiyo nzira iyo EU inonzwisisa nayo.
Zvinojekesawo kumusoro pamusoro pemasaini, sezvo mamwe mawebhusaiti aine masystem ekuti kana iwe uchipeta, kana zvimwe zvimiro mukati mewebhu, vanozvitora sekunge iwe unobvuma mutemo wekuki. Izvo hazvisi pamutemo kana, nekuti kana mushandisi asingazive, vanozopedzisira vagamuchira chimwe chinhu chavasina kunyatsoda. EU inojekesa «hapana mamiriro ezvinhu painogutsa zvinodiwa kuti zviitwe zvakajeka uye nekusimbiswa.".
Mamwe mashoko - Dhawunirodha iyo EDPB PDF
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » European Union inogadzirisa muayo EDPB pama cookies
Iyo itsva vhezheni yeRetroPie 4.6 inosvika nerutsigiro rweRaspberry Pi 4 uye nezvimwe